Should My Child Go Back to School: Ingabe ingane yami ingaphindela esikoleni? – Messages for Mothers
Should My Child Go Back to School: Ingabe ingane yami ingaphindela esikoleni?
Yebo. Ochwepheshe bathi kungcono iningi lezingane zibe sezikoleni
Kuyaqondakala ukuthi abazali bangazizwa bekhathazekile ngokubuyela kwezingane zabo esikoleni. Kodwa, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi izingane azivamile ukubamba i-COVID-19 kunabantu abadala, futhi iningi lezingane ngeke ligule nhlobo noma lizoba nokugula okuncane okufana nomkhuhlane.
Izingane ezinesifuba somoya, umzimba wabo ungezwani nokuthile kanye ne-HIV (ezisekwelashweni) zingaya esikoleni.
Uma ingane yakho inezinye izifo, xoxa nodokotela wakho ngengozi yokuya esikoleni.
← How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Ukukhathalela abantwana ukuba umzali une- COVID-19 → What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school: Yikuphi okufanele kwenziwe ukuvikela ingane yami ekutholeni noma ekudluliseni i-covid-19 esikoleni?